PressReader - Isolezwe: 2017-10-12 - IBafana ethubeni lokuwina eyokuhlungela eyoMhlaba
IBafana ethubeni lokuwina eyokuhlungela eyoMhlaba
AMASHWA okulimala alandele isilomo seLiverpool yase-England, uSadio Mane, angase aphendlele iBafana Bafana indlela yokungena ngomnyango ongemuva kwiNdebe yoMhlaba ezokuba seRussia ngonyaka ozayo.
Ukulimala kukaMane, ohlale elihola njengesibani iqembu lakhe lesizwe laseSenegal, kubukeka kuzoyithambisa iLions of Teranga emidlalweni emibili eyisalele eqoqweni. Le midlalo iyona futhi ezokhipha izwe elizoya eRussia kuleli qoqo ngo-2018.
U-Mane ujwayele ukulimala ikakhulukazi eqenjini lesizwe okuhlale kukhubaza iLiverpool njengoba kwenzekile kwi-Africa Cup of Nations (Afcon) edlule. Ngesikhathi uMane ekwi-Afcon ngaphambi kokuthi alimale, iLiverpool inqobe umdlalo owodwa kweyisikhombisa okukuveza obala ubumqoka bakhe uma esenkundleni.
Njengoba iLiverpool isimemezele ukuthi uMane ngeke alithinte ibhola kuze kube uDisemba lokhu kusho ukuthi iBafana izobhekana neSenegal engekho. EzikaStuart Baxter zizodudulana neSenegal ngoNovemba 10 ePolokwane emdlalweni iFifa eyathi awuphindwe. Kuzodlula izinsuku ezine kwenzeke lokhu iBafana ibhekise amabombo eDakar iyoqedela khona nayo belu iSenegal ngoNovemba 14.
UMane udonseke umsipha iSenegal inqoba ngo 2-0 kwiCape Verde kule midlalo yokuzama indawo endizeni ebheke eRussia maphakathi nonyaka ozayo.
Ngaphandle kwemidlalo yeBafana, uMane ngeke abonakale kowangoMgqibelo neManchester United, emithathu ye-UEFA Champions League neMaribo (kabili) neSevilla. Ngaphezulu kwalokhu lo mgadli uzokweqiwa eminye imidlalo yeligi eyisithupha okukhona kuyona oweTottanham noweChelsea.